NOC အင်ဂျင်နီယာငါ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » NOC အင်ဂျင်နီယာချုပ်ငါ
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: NOC အင်ဂျင်နီယာချုပ်ငါ
ရာထူး: NOC အင်ဂျင်နီယာချုပ်ငါ
ကုမ္ပဏီ: Hotwire ဆက်သွယ်ရေး
အဆိုပါ NOC အင်ဂျင်နီယာချုပ်ငါဖော်ထုတ်မယ်အပေါင်းတို့နှင့်ခြွင်းချက်နှင့်ကွဲလွဲချက်များအပေါ်သရုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်အထွတ်အထိပ်စွမ်းဆောင်ရည်မှာ run ကြောင်းကွန်ရက်မှာ Data, ဗီဒီယို, အသံများနှင့်လျှောက်လွှာပတ်ဝန်းကျင်သေချာနှင့်အတူတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ ဤသည်မှာအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုလုံး Hotwire ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်။ ကွန်ရက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်ထိရောက်မှုအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်စာရင်းဇယားကောက်ယူ။ အဖြစ်အပျက်လက်မှတ်တွေခြွင်းချက်အဘို့အထုတ်လုပ်ပြီးနှင့်အဖြစ်အပျက်၏တစ်သက်တာအဘို့စီမံခန့်ခွဲရသည်။ အားလုံးအဆင့်ကို 1 ဖြစ်စဉ်များ Troubleshoots နှင့်လိုအပ်အဖြစ်ပိုမိုမြင့်မားအဆင့်အထိကိုအရှိန်။ ပြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ကုစားကို detect ။ လွတ်လပ်ရေး၏အမြင့်မားတဲ့ဘွဲ့နှင့်လုံခြုံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အနည်းငယ်မျှသာကြီးကြပ်မှုနှင့်အတူလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ရရှိနိုင်စေရန်စောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာပေါင်းစပ် အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်မှုကွန်ရက်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုစောင့်ကြည့်။
လယ်ပြင်၌ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော router ကိုနှင့်ဆားကစ်၏ Non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင် Coordinate ။
တယ်လီကွန်မြူနီကေးရောင်းချသူပြုပြင်န်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက် dispatch Coordinate ။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရသိရသည် tools တွေကိုစောင့်ကြည့်ထဲကနေအလိုအလျောက်သတိပေးချက်တုံ့ပြန်ကြသည်။ ပြဿနာရဲ့အဆင့်နှင့်အလွန်တရာအရေးကြီးတယ်သိရှိနိုင်ရန်ဖို့ diagnostic tool များသုံးပါ။ တစ်ဦးတက်ကြွသောထုံးစံ၌အမှားနှင့်အခြေအနေများရှာဖွေပါ။ ဘယ်မှာသင့်လျော်သောအကြောင်းကြောင့်ရောဂါနှင့်လျင်မြန်စွာဖြေရှင်းရန်။
စနစ်များသည် Periodic ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများလုပ်ဆောင်။
သူတို့ဖြစ်ပေါ်အဖြစ်ပြဿနာများကိုဖော်ထုတ်ဖြေရှင်းရန်လုပ်ဆောင်ချက်အကောင်းဆုံးသင်တန်းအပေါ်ဆုံးဖြတ်ကွန်ယက်, စနစ်များနှင့် SMS ကို applications များ၏တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနှင့်အသိပညာကိုသုံးပါ။
configure လုပ်ပြီး tools တွေကိုစောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းတာဝန်ရှိသည်။
TCP / IP ၏အသိပညာ။
ထိုကဲ့သို့သော OSPF, BGP, MPLS အဖြစ် router များနှင့် network protocol ၏အသိပညာ (Cisco သည်) ။
အထူး NOC / လုပ်ငန်းစဉ်အရေးအသားကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်ပေါင်းလေ့ကျင့်
သီအိုရီ / အကောင်အထည်ဖော်ရေးတစ်ပေါင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအတွေ့အကြုံ
ထိုကဲ့သို့သော Solarwinds, negios အဖြစ်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး applications များအမျိုးမျိုး၏ diagnostic အတွေ့အကြုံကို
တစ်ဦး Help Desk သို့မဟုတ်မြင့်မားသောအသံအတိုးအကျယ်ခေါ်ဆိုခစင်တာအတွက်အတှေ့အကွုံ 1-2 နှစ်ပေါင်းအနည်းဆုံးပိုမိုနှစ်သက်သည်။
ဘုံ tools များ၏အသိပညာ, နည်းလမ်းများနှင့်နည်းစနစ်အပါအဝင်အိုင်တီစစ်ဆင်ရေးအတွက်အလုပ်အတွေ့အကြုံ၏2နှစ်ပေါင်းအနည်းဆုံး
ကွန်ရက်များနှင့် / သို့မဟုတ် server ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုကျွမ်းကျင်မှုအတွက်တဖြည်းဖြည်းတာဝန်ရှိအလုပ်အတွေ့အကြုံ၏2နှစ်ပေါင်းအနည်းဆုံး
routing protocols, အထူးသ OSPF နဲ့ BGP နှင့်အတူအတွေ့အကြုံကို
Optical ပလက်ဖောင်းများ, ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနှင့် / သို့မဟုတ် troubleshooting နှင့်အတူအတွေ့အကြုံကို
တစ်ကေဘယ် provider ကပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းအလုပ်အတွေ့အကြုံ
တတိယပါတီ circuit ကိုပံ့ပိုးပေးနှင့်အတူအလုပ်အတွေ့အကြုံ
ထိုကဲ့သို့သော CCNA, CCNP, နှင့် / သို့မဟုတ် CCDP အဖြစ်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသိအမှတ်ပြုအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်
မည်သည့် Optical platform ပေါ်တွင် vendor အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန် (ဆိုလိုသည်မှာ: Motorola က, ZTE Alcatel စသည်တို့)
scripting (shell ကို, ကိုမျှော်လင့်, PHP, pyton,
Hotwire ဆက်သွယ်ရေးအနေနဲ့တူညီသောအခွင့်အရေး Equal Opportunity အလုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးအရည်အချင်းပြည့်မီလျှောက်ထားလူမျိုး, အသားအရောင်, ဘာသာရေး, လိင်, မူရင်းနိုင်ငံသား, အသက်, မသန်စွမ်း, ကျား, မဝိသေသလက္ခဏာနှင့် ပတ်သက်. , လိင်, ဒါမှမဟုတ်ဝါရင့် status ကိုမပါဘဲအလုပ်အကိုင်အများအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခံရလိမ့်မည်။
Hotwire ဆက်သွယ်ရေးရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်ဝန်ထမ်းများအေဂျင်စီများမှတဆင့်သို့မဟုတ်အနေဖြင့်မလိုလားသောကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုလက်ခံမထားဘူး။ အားလုံးမလိုလားသောကိုယ်ရေးရာဇဝင် Hotwire ဆက်သွယ်ရေး၏ပိုင်ဆိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမည်ဖြစ်ပြီး Hotwire ဆက်သွယ်ရေးတစ်ဦးနေရာချထားအခကြေးငွေပေးချေရန်တာဝန်ရှိသည်ဟုမည်မဟုတ်ပါ။